घर आन्तरिक डिजाइन
समानुपातिक सडक परिदृश्य सिर्जना गर्न एक महत्त्वपूर्ण भूमिका विभिन्न प्रकाशले खेलेको छ। एक विशेष भूमिका तथाकथित फेडडे लुमिनायरमा आवंटित गरिएको छ। तिनीहरू केवल प्रकाश को आफ्नो तत्काल प्रकार्य को पूरा न गर्नुहोस, तर मुखौटा सजावट को एक दिलचस्प तत्व पनि हुन सक्छ र इमारतों को वास्तुकला रोशनी को प्रभावी प्रभाव हो।
भित्री सडक रोशनी
नियमको रूपमा, अनुहारमा अँध्यारो भएका क्षेत्रहरूलाई उज्ज्वल गर्नको लागि मुखौटा प्रकाश स्थापित गरिएको छ। तर उनीहरूको मद्दतले पनि इमारतको अनौठो मोल्डिंग, छैटौं, स्तम्भहरू र अन्य तत्वहरूको रोचक वास्तुगत विशेषताहरूलाई जोड दिन सम्भव छ। यस उद्देश्यका लागि, विशेष स्पेसड लुमेनायरहरू छनौट गर्न उत्तम छ, भवनहरू प्रकाशका लागि विशेष गरी डिजाइन गरियो। तर अनुहारको प्रकाशका लागि लैंप छनौट गर्दा, कृपया ध्यान दिनुहोस् कि तिनीहरू (लैंप) भवनको उपस्थिति खाली गर्न हुँदैन - सम्भवतः आकार, रङ, आकार, बाहिरी डिजाइनमा संयुक्त।
अनुहार को रोशनी को लागि फिक्स्चर विशेष मेटल हाइडाइड लैंप संग लैजान सकिन्छ, जो एक उच्च डिग्री रंग रेंडेशन को विशेषता हो। एक आर्थिक विकल्प को लागि, तपाईं पारंपरिक फ्लोरोसेंट लैंप को सिफारिश गर्न सक्छन्। तर सबैभन्दा भरोसेमंद, टिकाऊ र, महत्त्वपूर्ण, आर्थिक रूपले फेस-ह्यान्डस्पेस लैंपको साथ फेसको लैंप हो।
एक नियम को रूप मा, दीपक को प्रकार को स्थापना को बावजूद, मुखौटा फिक्स्चर को एक सानो आयाम र एक पर्खाल माउन्ट छ - त्यसैले यो मुखौटा मा अनावश्यक माउंट गर्न को लागी आसान छ। यद्यपि, केहि अनुहार लैंपमा धेरै सजावटी डिजाइन छ र भवनको मुखौटाको सजावटको अतिरिक्त तत्वको रूपमा सेवा गर्दछ। यो पनि ध्यान दिनु पर्छ कि मुखौटा फिक्स्चर, रोशनी को दिशा मा निर्भर गर्दछ, या तो एक पक्षीय या दुई पक्षीय हुन सक्छ। स्थापना स्थितिमा निर्भर गर्दछ, दुई-पक्षीय लैंपहरू उज्यालो र तल, वा छेउमा उज्यालोको प्रवाह प्रत्यक्ष।
अपार्टमेन्टमा फ्लोर आवरण
वालपेपरका लागि टाँस्ने - कुन छनौट गर्ने राम्रो छ?
पछाडि स्लैबको लागि कर्ब
घरमा कैबिनेटको लागि फर्नीचर
घरको सुन्दर मुखौटा
सिन्धुपाल्चोकको पातलो तहको लागि साइडिंग
MDF प्यानलहरूसँग छत समाप्त गर्दै
केटाको कोठाको कोठा
एक सानो भान्साको लागि फर्नीचर
बाथरूममा सेतो टाइल
आध्यात्मिक र भौतिक मूल्यहरू
डर्कहोली केप रिजर्व
एड्राना लिमा एक फुटबल खेलाडीको लागि एक जना गोठालालाई पराजित गर्यो
बालबालिकाको बेड ट्रांसफर्मर
चेरीसँग केक - स्वादिष्ट मिठाईको सबैभन्दा राम्रो र नयाँ व्यञ्जनहरू
मंगा कसरी बढ्छ?
छालाका लागि कष्ट
"फास्ट र थोरै" रक स्टारले नयाँ पुर्खा छोरीलाई देखाउनुभयो
नींबू संग जाम देखि जाम
भित्री ट्राउट घरमा
व्यापार शैली कपडा 2014
ग्रीसबाट ल्याउन के हो?
स्तन ग्रंथहरूमा पिठ - यो खतरनाक छ?
बेन्टले एलिजाबेथ II सबैद्वारा खरीद गर्न सकिन्छ
काठ को शेल्फ
कला डेको शैलीमा वालपेपर
अभिनेता जोनाथन रीस माईर्स पहिले पहिला उनको श्रीमती र छोरा संग फिल्म को प्रीमियर मा आए
रूस को स्वतन्त्रता दिवस - छुट्टी को इतिहास